kuvhuraSUSE: Mharidzo - Networks PYMES | Kubva kuLinux
kuvhuraSUSE: Mharidzo - SME Networks
phico | | GNU / Linux, Networks / Maseva, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Mhoro shamwari !.
Serie "SME Networks»Yakagadzirirwa vese avo avo, neimwe nzira kana imwe, vanofanirwa kubata nemhando iyi yeakajairika manetwork mumakambani edu kana nzvimbo dzekushandira zuva nezuva. Kugoverwa kwatakasarudzira budiriro yavo ndekwekusimbiswa uye kuchengetedzeka. Isu tatozvitsanangura zvakadzama mune iyo posvo Kugovera pamusoro penguva yeLinux Distribution.
Vaverengi vazhinji vanoziva zvandinoda zveDebian izvo zvandinoratidza kubva kuchinyorwa changu chekutanga chakanyorwa -inenge makore mashanu apfuura- yeiyo blog vakata.uci.cu yakatsaurirwa kune Mahara Software, yaive Usarega muti uchititadzisa kuona sango!, yakaburitswa zvakare mu KubvaLinux yemwedzi waMarch 2012.
Nekudaro, uye kubvira ipapo, pese paindibvunzwa nemumwe munhu nezvekurudziro yangu yekugovera nharaunda yebhizinesi, ini ndaigara ndichipindura kuti: vhura.
Akatsanangura zvakare kuti Desktop yemba kana yekushandisa wega seSystem Administrator haina kufanana neVashandi vakatsaurirwa kushandiswa nevashandi vekambani inogamuchira nyika yeFree Software.
Ini ndakapindura kuti, kunyangwe hazvo kushandiswa kukuru kwezviwanikwa zvekugovera uku neruremekedzo, semuenzaniso, Debian, ndakachengeta kuraira kwangu. Iko kuvhuraSUSE kwaive kugoverwa kwakagamuchirwa nevagadziri vayo kuti vashandiswe mumakambani, pasina kubvisa chokwadi chekuti chakaringana kushandiswa paSeva, Desktops neWorkstations, sezvo iri dura rekuparadzira.
Kana isu tichienderana nezvose zvataurwa pamusoro, saka tinofanirwa kugadzirisa kugovera kukuru uku. Hatina iyo yekuisikidza DVD yeshanduro yako 42.2 kuvhuraSUSE Leap kana kubva kune ayo ekuchengetera, tisingataure kuti isu hatine Internet kubatana nekukasira zvakakwana kuti iite yakananga kuiswa kubva pawebhu.
Zvinofadza kuti isu tine DVD yaro yekupedzisira vhezheni vhuraSUSE 13.2 yakaburitswa munaNovember 24, 2014, pamwe neakakwana zvakakwana dura iro rinorema anenge 88.5 Gbytes.
1 Mafungiro edu ...
2 kuvhuraSUSE 13.2 iri… zvinoenderana nevakagadzira vayo
4 Zvinongedzo zvekufarira
4.1 VhuraSUSE Wiki tsoka
5 Kuuya kunouya
Mafungiro edu ...
Iyo SME inoda maSeva neWorkstations ane akatsiga, akachengeteka uye ari nyore kushandisa masisitimu anoshanda.
Kana iwe usina timu yehunyanzvi yakanyatsogadzirirwa Linux mahunyanzvi, iwe zvakare unoda kurerukirwa kwekumisikidzwa, kumisikidzwa, uye kusangana kweese server uye nzvimbo yekushandira, neakasiyana manetwork masevhisi -kusanganisira kusimbiswa- ayo anoshandiswa mukati iyo SME.
Ngatigarei tichirangarira kuti muPYMES Series isu tiri kutaura nezve nharaunda dzebhizinesi kana nharaunda - kwete zvemumba- izvo zvine chinangwa chikuru kuwana mhindu nemitengo yakaderera, kusanganisira kudzidziswa, rutsigiro rwehunyanzvi, software, zvichingodaro.
Kana iyo SME isina zviwanikwa zvemari zvakakosha kubhadhara iyo technical Support Service, uye iine chete tekinoroji - vashandi vekombuta vane ruzivo rwekutanga, kuvhuraSUSE ndiyo yakanaka sarudzo yekufunga.
Kana iyo SME ichaenda kubva kuWindows, semuenzaniso, kuvhuraSUSE iri zvakare yakanaka sarudzo yekufunga.
Iko kugovera ine yakanaka kwazvo zvinyorwa zvehunyanzvi izvo, pakati pemimwe mitauro, inosanganisira Spanish.
kuvhuraSUSE 13.2 iri… zvinoenderana nevakagadzira vayo
Kana tikashanyira iyo VhuraSUSE Wiki muchiSpanish, pane peji vhuraSUSE Portal: 13.2 tichawana izwi neshoko -pakati perimwe ruzivo- zvinotevera:
Kuedza kwakawanda kwakaiswa mukuyedza mune ino positi, ne zvinowedzera kune yedu yakavhurikaQA otomatiki kuyedza chishandiso, chishandiso chinovimbisa kuti mhedzisiro yacho haina mahombekombe asingafadzi. Iyo Btrfs faira sisitimu ndiyo yakasarudzika faira sisitimu yemidzi vhoriyamu, nepo XFS iri default faira system yeiyo / imba vhoriyamu. Iyo Linux 3.16 kernel inounzawo kuvandudzwa mukugadzikana uye kuzivikanwa kweakasiyana Hardware. Pamusoro pezvo, iyo kodhi sosi yeYaST yakura mushure mekuendeswa kunaRuby, mutauro unobatsira kugadzirwa kwezvinhu zvitsva nemidziyo.
Kuburitswa uku kunouya neAppArmor 2.9 inogoneswa nekutadza, iyo inoshandura mukuwedzera kuchengetedzeka, uye ine mbiri yakasimba muAppArmor. Kune mamwewo akawanda akawedzeredzwa mapakeji anosanganisira mazhinji mamwe ma network zvishandiso seSamba, AutoYaST uye nevamwe vazhinji.
kuvhuraSUSE 13.2 kunouya neGCC 4.8 uye sarudzo yekuisa iyo nyowani GCC 4.9, uye Qt 5.3 iyo inounza kuwanda kwakawanda kune QT interface. Iwe zvakare une sarudzo yekuisa iyo nyowani KDE5 (iyo ichiri pasi pekuvandudzwa).
Mukuburitswa uku YaST nyowani "yakashandurwa" mumutauro weRuby yakura kusvika padanho rekuti codebase rayo rave kuchengetedzeka zvakanyanya uye rakazara nezvinhu zvitsva kupfuura zvawaitarisira kubva kuYast. ActiveDoc Inoenderera mberi iri nzvimbo yekuwana zvinyorwa zvezvishandiso zvakasiyana izvo nekukurumidza kana gare gare iwe zvaunowana munyika yeLinux. Vhezheni 13.2 inopawo KDE 4.14 inova inova nzvimbo yedesktop nepo chirongwa cheKDE chichienderera mberi nekugadzira izvo zvichave Plasma 5. Paunenge uri muGNOME iwe unozogona kunakidzwa neshanduro yayo 3.14. LXDE Yakagadziridzwa kusunungurwa uku nemapakeji akagadziridzwa, kugadzirisa kunoonekwa, uye toni yezvigadziriso.
KDE ikozvino inouya nerutsigiro rwekubatanidza nharembozha dzako kuburikidza nepakeji kdeconnect. Iyo nyowani Btrfs faira sisitimu iyo yakagadzwa neyakagadzika kune iyo midzi yekuparadzanisa, zvinoreva kuti iwe uchave uine zvakawanda zvakawanda maficha zviripo, kupfuura zvawaimbofungidzira. YaST inouyawo neiyo nyowani Qt interface iyo yakagadziridzwa zvakare kuQt5.
Tiri kutarisana nemugove wakanaka kwazvo watinogona kusarudza kukambani yedu.
Portal: kuvhuraSUSE 13.2
Maitiro ekufambisa kubva paWindows
Yekupedzisira Kugadzikana Kugovera
Wiki Mitemo uye Mamiriro
vhuraSUSE Rolling Regedza Tumbleweed
VhuraSUSE Wiki tsoka
2011 Novell, Inc. nevamwe. Zvese zvirimo zvinowanikwa pasi pemitemo yeGNU Yemahara Gwaro Rezinesi vhezheni 1.2 ("GFDL") kunze kwekunge zvaratidzwa zvimwe. | Mitemo yenzvimbo
Tinokukoka iwe kuti uenderere mberi nezvikamu zvedu zvinotevera: vhuraSUSE Desktop, Qemu-KVM ine openSUSE, uye DNS - DHCP ine yakavhurikaSUSE
Sezvauri kuona, muverengi shamwari, marongero ezvinyorwa anosiyana zvichienderana neprodhipoziti uye kushamisika kwatinako kwauri. ????
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Networks / Maseva » kuvhuraSUSE: Mharidzo - SME Networks
Zvakanaka! Ini ndinoshandisa OpenSuse muhupenyu hwangu hwezuva nezuva uye ini ndanyanyisa kugutsikana.
Usazvipokana, Leo, ndeimwe yemakuru Matatu akagoverwa. Mirira zvinotevera zvinotevera pakuvhuraSUSE!
Kudzoka muna 2011 ndakashandisa OpenSuse kekutanga (padanho redesktop), yaive panguva iyoyo iyo distro iyo yakatanga nekukurumidza, saka ini handina kuibata zvakare kudzamara ndaisa opensuse tumbleweed gore rapfuura (iro rinoshandawo mushe) ... Yenguva yekuzviita padanho re server, izvo zvandine chokwadi ndipo panogona kushandiswa zvakanyanya distro iyi
kuvhuraSUSE ndeyekuparadzira chinangwa. Nayo tinogona zvakare kugadzira tafura refu. Ini ndinofunga chombo chako chakanakisa iYaST, kunyanya kune avo vasina kujaira kuita nekugadzirisa masevhisi kuburikidza neconsole. IWindows server manejimendi inofanirwa kuchinjika pasina matambudziko kushandisa openSUSE, uye nekudaro kudzikisa mutengo muSME yako. Izvo zvakare zvinoita kuti hupenyu hwezuva nezuva huve nyore kune Linux Sysadmin.
Zvakangoitika, ndine Leap 42.2 palaptop, ndakawana Plasma 5 versionitis uye ini ndakaisa Stretch asi yaive isina kugadzikana, ivo vakakurudzira Leap uye ndakaiyedza ndisina tariro yakawanda asi zvakandishamisa, boutique Plasma desktop. Izvo zvandinosuwa ... iyo hombe Debian zvinyorwa.
Mhoro Dhunter !!!. Wakanga warasika muzvikamu izvi. Ini handina kuyedza Leap zvakadaro nekuda kwenyaya repo. Kana ini ndakaudzwa, avo vanoisa zvakananga kubva paInternet, izvo zviri kunze kwemubvunzo. Ini ndinoenderera neangu Debian Jessie uye wangu MATE. 😉 Ini ndichanyora nezve Leap, mushure mekunge Eduardo Noel andiunzira zororo rinofadza.
Ungachinja sei iyo ls yekuraira mavara muLinux
Sayonara Player: Anokurumidza uye asingaremi mutambi ane akawanda maficha